Tiketi Ugbo ala Eurostar na ọnụ ahịa njem | Save A Train
Home > Tiketi Ugbo ala Eurostar na ọnụ ahịa njem
The Ọrụ ụgbọ oloko Eurostar ụgbọ oloko na-aga njem ruo 320 km otu awa n'okporo ụzọ ụgbọ elu. Ebe ọ bụ na Eurostar malitere ịrụ ọrụ 1994, Ewula uzo ohuru na Belgium na UK iji belata oge njem n'etiti njem Eurostar. Emechara uzo abuo Ọdụ Ọgba Ọdụdọ na 14th nke November 2007, mgbe ebugharị ọdụ London nke Eurostar site na Waterloo International gaa London St Pancras International ọdụ ụgbọ okporo ígwè.
Number 1: Detuo tiketi Eurostar tupu ị nwere ike
Number 2: Njem site na Eurostar n'oge oge dị elu
Number 3: Denye tiketi maka Eurostar mgbe ejiri n'aka na usoro njem gị
Number 4: Zụta tiketi Eurostar gị na Save A Train
Euro ụgbọ ala Eurostar nwere ọtụtụ ọrụ klaasị maka emefu ego ọ bụla, na ụdị onye njem ọ bụla, ma ị bụ onye njem azụmahịa ma ọ bụ oge ezumike ma ọ bụ abụọ both
The Tiketi Eurostar bụ ọnụ ala karịa ego ụgbọ ndị a na-enweta. Ọ kachasị mma itinye tiketi ụgbọ oloko a tupu oge eruo, n'ihi Standard tiketi ọnụahịa dị ala – ha na-ere ngwa ngwa. Ndị njem na-ejide tiketi dị larịị nwere ike iwere 2 akpati ozu + 1 buru ngwongwo n’efu. Ndị njem nọ na Tiketi Eurostar nwekwara ike ịnụ ụtọ WiFi na nhọrọ oche efu. Tiketi ọkọlọtọ na-abụkarị anaghị akwụghachi ụgwọ.
Igwe tiketi a dị oke ọnụ karịa ụdị tiketi tiketi Euro Euro, na Akwụkwọ ọkwa Premier na-enye ndị ọzọ ọrụ. Na mgbakwunye na uru nke ọkọlọtọ Standard anyị dere n’elu, Tiketi Premier Standard na-enye oche ndị mara mma karịa nke nwere legroom, a na-akwụkarị ụgwọ akwụkwọ na akwụkwọ akụkọ na-akwụghị ụgwọ, ị ga-erikwa nri dị ọkụ na ọ andụ drinksụ n’ebe oche gị dị na Eurostar. A na-agbanwegharị tiketi Premier Standard na ụgwọ dabere na ebe ị na-aga.
The Eurostar Business Premier tiketi ndị na-azụ ahịa nwere ike ịnụ ụtọ uru niile anyị dere n’elu mana ha nwekwara, Ndị njem Eurostar Business Premier ga-erite uru na 3 ibu akpa kama 2, menu nri na-ekpo ọkụ okomoko nke ndị osi nri a ma ama Raymond Blanc a ma ama, Ndị njem nke Business Premier nwere ike ịnụ ụtọ ụlọ ezumike tupu ha abanye ụgbọ oloko na-aga London ma ọ bụ site na Lọndọn, na mgbakwunye a na ndenye pụrụ iche na naanị 10 Nkeji oge na maka ịkwụ ụgwọ tagzi naanị maka ha. Ọtụtụ ihe, ụdị nke tiketi Eurostar Business Premier Train na-enye ohere njem dị mma: ị nwere ike gbanwee ma kagbuo njem gị, tupu ọpụpụ gị ma ọ bụ ruo 60 ụbọchị mgbe ọpụpụ gị, niile na enweghị ego mmezi.
No, na ntụle, A na-akwado Eurostar site na isi aka na ntinye aka ma ọ bụ na njem ọ bụla anaghị akwado ya, mana ọ bụrụ na ị na-eme njem ọtụtụ site na Eurostar ị nwere ike isonyere Eurostar Club, nke a bụ usoro iguzosi ike n'ihe nke na-enye gị ohere ịnakọta isi ụgbọ oloko ka ị nwee ike ịgbapụta ihe ndị a na tiketi ma ọ bụ ego. Earn na-akpata 1 rụtụ aka maka £ 1 ọ bụla i mefuru na ihe ndị a, ị ga-enye gị ihe ùgwù ụfọdụ:
– Ọ bụrụ na ị ga-eru 500 isi: ị nwere ike inweta 1 ụgbọ elu nkwalite ọrụ ụgbọ elu.
The Brussels Midi-Zuid (Brussels South) ọdụ dị n'etiti Brussels, mana gbaa mbọ ghọta na ịchọrọ Brussels Midi-Zuid ọ bụghịkwa Central Central Station, Trainlọ ọdụ ụgbọ oloko Brussels Midi-Zuid nwere 22 na-azụ usoro nyiwe, na ụlọ ọrụ tiketi Eurostar dị nso na ikpo okwu 8. Tiketi ụgbọ oloko Eurostar na-enye gị ohere ịga njem n'enweghị nsogbu n'etiti Brussels Midi Zuid na Brussels Central.
Amsterdam Centraal (Amsterdam Central Station) di na Amsterdam city center n’akuku osimiri, mgbe ị na-ahapụ ọdụ ụgbọ oloko, see na-ahụ Amsterdam Main Street juputara na ebe nkiri dịka madame Tussauds ọ bụghị site na mpaghara mpaghara ọkụ ọkụ. Dị ka n'ọtụtụ ọdụ ụgbọ oloko na Europe, Inwere ngwongwo ngwongwo na-emeghe ma na-emechi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga 1 otu ụbọchị ma ọ bụ tupu ị nwee ike ịbanye na nkwari akụ gị.
Antwerp Central Station bụ ebe ị ga-abanye Eurostar na Antwerp obodo nke abụọ buru ibu na Belgium, Ọ bụrụ na i si Antwerp gaa, anyị na-atụ aro ka ị bịa n'ọdụ ụgbọ oloko ogologo oge karịa ka akwadoro 1 oge tupu ọpụpụ n'ihi nke a lọ ọdụ ụgbọ oloko meriela onyinye maka ịchọ mma na ihe owuwu ulo ya 5 ala na ihe ya di nma ile anya n’ime ya.
You choro itinye peeji a na saiti gi? Pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-eurostar%2F%0A - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro), Ma ọ bụ ị nwere ike ị jikọtara ọnụ ugbu a na ibe a.